स्वेता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ? – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०४, २०७७ समय: १६:१६:४१
स्वेता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ? स्वेता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ?
स्वेता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ? स्वता खड्काले आँफुभन्दा निकै कान्छा युवक बिजेन्द्रसन्ग बिहे गर्नुको खास खुल्यो, यत्रो ठूलो धोका ?